Kore စျေး - အွန်လိုင်း KORE ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Kore (KORE)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Kore (KORE) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Kore ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $206 207.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Kore တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Kore များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
KoreKORE သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0996KoreKORE သို့ ယူရိုEUR€0.0845KoreKORE သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0763KoreKORE သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0909KoreKORE သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.899KoreKORE သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.629KoreKORE သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč2.22KoreKORE သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.373KoreKORE သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.133KoreKORE သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.139KoreKORE သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$2.23KoreKORE သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.772KoreKORE သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.542KoreKORE သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹7.47KoreKORE သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.16.82KoreKORE သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.137KoreKORE သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.151KoreKORE သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿3.11KoreKORE သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.694KoreKORE သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥10.55KoreKORE သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩118.44KoreKORE သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦38.53KoreKORE သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽7.34KoreKORE သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴2.76
KoreKORE သို့ BitcoinBTC0.000009 KoreKORE သို့ EthereumETH0.000253 KoreKORE သို့ LitecoinLTC0.00173 KoreKORE သို့ DigitalCashDASH0.00102 KoreKORE သို့ MoneroXMR0.00107 KoreKORE သို့ NxtNXT6.98 KoreKORE သို့ Ethereum ClassicETC0.0143 KoreKORE သို့ DogecoinDOGE28.4 KoreKORE သို့ ZCashZEC0.00105 KoreKORE သို့ BitsharesBTS3.84 KoreKORE သို့ DigiByteDGB3.41 KoreKORE သို့ RippleXRP0.339 KoreKORE သို့ BitcoinDarkBTCD0.00339 KoreKORE သို့ PeerCoinPPC0.332 KoreKORE သို့ CraigsCoinCRAIG44.86 KoreKORE သို့ BitstakeXBS4.2 KoreKORE သို့ PayCoinXPY1.72 KoreKORE သို့ ProsperCoinPRC12.35 KoreKORE သို့ YbCoinYBC0.00005 KoreKORE သို့ DarkKushDANK31.57 KoreKORE သို့ GiveCoinGIVE213.04 KoreKORE သို့ KoboCoinKOBO22.09 KoreKORE သို့ DarkTokenDT0.0917 KoreKORE သို့ CETUS CoinCETI284.05
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 09 Aug 2020 05:50:02 +0000.